Maxaabiis dhacday lacag badan iyaga oo aanan xabsiga ka bixin - BBC News Somali
Maxaabiis dhacday lacag badan iyaga oo aanan xabsiga ka bixin
Nidaamka Jpay ee ay maxaabiista isticmaalaan
Boqolaal ah maxaabiista xabsiga Idaho ayaa waxa ay jabsadeen barnaamijka kombutarada ee (software) "si ay sare ugu qaadaan si been abuur ah "tirada lacagaha ugu jira sanduuqyada bangiyadooda ,waxaa sidaasi sheegay saraakiisha xabsigaasi.
Waaxda Idaho ayaa waxay shaaca ka qaadeen in maxaabiis dhan 364"ay si ula kac ah uga faa'idaysteen jileecani" si ay u qaataan lacag dhan ku dhawaad $225,000.
50 maxbiis ayaa sanduuqyada bangiyadooda u wareejiyay lacag dhan $1,000 midkiiba halka maxbuus kale uu wareejiyay lacag dhan $9,990.
Afhayeen u hadlay xabsigaasi ayaa sheegay "in dhaqankani aan wanaagsanayn aysan ku lumin lacag ka mid ah tan canshuur bixiyayaasha.
Bayaan BBC la soo gaarsiiyay ayaa af-hayeen u hadlay waaxda Idaho,Jeff Ray waxa uu sheegay in maxaabiistani ay u dhaceen oo ay jabsadeen nidaamka JPay.
Nidaamka JPay ayaa ah shirkad si gaar ah loo leeyahay taasi oo u saamaxda maxaabiista Mareykanka aaladda u saamaxaysa in lacago ay xawilaan, ay soo dajistaan heeso iyo ciyaaraah kombuyuutarka islamarkan ay qaraabadood kula xiriiri karaan.
Mr Ray ayaa sheegay in maxaabiistan ay galangal ku yeesheen nidaamka JPay si ay sare ugu kacdo tirada lacagta loogu soo shubay sanduuqyada bangiyadooda.
Saxafi caan ah oo ka mid ah maxabiistii Itoobiya cafisay
Dagaalka Suuriya:Magaalooyiin hor leh oo laga daadgureeyay dadkii daganaa
Itoobiya oo siidaynaysa 2,000 oo maxaabiis ah
Ma jirto lacago imika lagu shubay bangiyada maxabiista, sida ay saraakiisha xabsiga sheegeen.
"Ficilkan waxa uu ahaa mid ula kac ah ee ma ahayn mid kamaa ah," ayuu yiri Mr Ray.
"Waxa ay u baahnayd aqoon ku saabsan in uu qofka yaqaanno nidaaamka JPay iyo qaabka la isugu dhufto xisaabaadka si sidaasi daraadeed si aan sax ahayn ay lacagu ugu shubtaan sanduuqyada bangiyadooda."
Maxaabiis ku xiran afar xabsi oo ay dowladda leedahay iyo xabsi si gaar ah loo leeyahay ayaa la ogaaday in ay ku lug lahaayeen howshan horraantii bishan.
Bayaan ay soo saartay shirkadda JPay oo ay qortay wakaaladda wararka ee AP ayaa af-hayeenka JPay,Jade Trombetta waxa ay sheegtay in sharkadda"ay ku faraxsan tahay in ay u saamaxdo maxaabiista xabsiyada ku jira adeegyo ay kula xiriiri karaan asxaabtooda iyo qoysaskooda ,barnaamijyo, waxbarsho ayna heli karaan maaddaalo".
"Iyada oo aqlabiyada shaqsiyaadka ay si wanaagsan u isticmaalaan tiknoolajiyadeena , waxa aan hadana ka shaqaynaynaa sidii aan sare ugu qaadi lahayn adeegeena si aan uga hortagno in si qaldan loo adeegdsado."
Mark Molzen,oo ah afhayeenka shirkadda xabsiyada siisa internetka-ka CenturyLink, ayaa sheegay in ay imika la xaliyay jaleecaasi horseeday in la jabsado software,balse waa uu diiday in uu sharaxaad ka bixiyo qaabka ay u dhacday wareejinta lacagahayni.
Raysul wasaaraha UK maxay la tahay inuu sameyn lahaa haddii uu Putin dumar ahaan lahaa
TOOS Maxay tahay eedeynta dowlada Soomaliya ay ka jawaabtay ee uga timid Soomaliland?
Askeri Soomaaliya ka soo dagaallamay oo si layaab leh ugu bareeray dagaalka Ukraine